Hanana mombamomba ny mpampiasa ao amin'ny Netflix | Vaovao IPhone
Hanana mombamomba ny mpampiasa ao amin'ny Netflix izahay
Omaly aho dia niresaka momba ny beta vaovao natombok'i Apple avy amin'ny firmware an'ny Apple TV namela ilay mpampiasa misintona hira ary rakikira avy amin'ny fahita lavitra miaraka amin'ny Apple ID. Raha nividy hira tamin'ny iPad isika dia afaka nihaino azy tamin'ny Apple TV ary ny mifamadika amin'izany. Dingana tsara hatrizay, avelan'ny mpilalao haino aman-jery Apple handefa sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra (tara).
Amin'ity tranga ity dia holazainay aminao ny momba ny vaovao vaovao eo amin'ny tontolo iainana: «Streaming«. Raha manana Apple TV ianao dia azo antoka fa manana fampiharana antsoina Netflix ahafahantsika mijery andianà fahitalavitra, sarimihetsika tsy voafetra (sy maro hafa) amin'ny sarany isam-bolana. Ny lafy ratsy dia io sehatra lehibe io tsy misy any Espana, amin'izao fotoana izao. Ny vaovao dia nanambara i Netflix fa hanana ny fahafaha-manao izany isika mamorona mombamomba ny mpampiasa ao anatin'ny kaonty tsirairay mba hisorohana ny fikorontanana.
2 Mombamomba ny mpampiasa amin'ny Netflix
Andao alao sary an-tsaina hoe any Mexico isika (izay raha manana Netflix) miaraka amin'ny Apple TV. Manana kaonty Netflix aho ary Mizara amin'ireo rahalahiko sy havako aho (hisorohana azy ireo tsy handoa intsony). Ny olon-drehetra mahita izay tadiaviny ary noho izany, rehefa mandeha aho hijery izay atolotry ny lampihazo, tsy misy dikany satria mila angona avy amin'ny andian-tantara sy sarimihetsika rehetra izay jeren'ny fianakaviana manontolo.
Inona no vahaolana? Ity:
Mombamomba ny mpampiasa amin'ny Netflix
Miaraka amin'ity lahasa vaovao ity, ity orinasa ity dia mikendry ny hanao ny fitaovana fanolorana ho hendry kokoa ary ny mpampiasa tsirairay dia manana traikefa manokana. Jereo ny fomba fiasan'izy io:
Rehefa miditra amin'ny Netflix amin'ny fahitalavitra isika dia manana safidy hiditra amin'ny mpampiasa antsika. Ny pejin'ny mpampiasa tsirairay dia samy hafa sy samy hafa tanteraka araka ny fisoratana anarana, ny tiany ary ny fomba fijerin'izy ireo, izany hoe, ao anatin'ny kaonty mitovy dia mety misy mpampiasa samihafa, hisorohana ny toe-javatra voalaza etsy ambony.
Fanazavana fanampiny - Beta vaovao amin'ny Apple TV dia manamafy fa azo atao ny mividy mozika amin'ny iTunes
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Hanana mombamomba ny mpampiasa ao amin'ny Netflix izahay
Android izao dia manana ny "Find My iPhone" ofisialy
Minigore 2: Zombies dia azo alaina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ihany koa